Ukusetshenziswa kwamakhamera namadivayisi okurekhoda - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
I-Help Center – ikhasi lokuqala
Ukusikisela kuzoboniswa ngemva kokuthayipha endaweni yokusesha. Sebenzisa imicibisholo ebheke phezulu naphansi ukuze ubuyekeze. Sebenzisa u-enter ukuze ukhethe. Uma okukhethile kungumusho, lowo musho uzothunyelwa ekusesheni. Uma ukusikisela kuyilinki, ibhrawuza izokuya kulelo khasi.
Ngena ku-akhawunti noma uvule i-akhawunti
Mayelana ne-Airbnb – isihloko sosizo
Izinqubomgomo zomphakathi wethu – isihloko sosizo
Ukuba yimfihlo – isihloko sosizo
Ukusetshenziswa kwamakhamera namadivayisi okurekhoda – isihloko sosizo
Ukusetshenziswa kwamakhamera namadivayisi okurekhoda
Ukuze sehlise ukukhathazeka kuBabungazi nasezivakashini, izinto zokuphepha ezinjengamakhamera okuphepha namadivayisi okuqapha umsindo zivunyelwe, inqobo nje uma zizodalulwa ngokucacile encazelweni yendlu futhi zingaphuli ilungelo lobumfihlo lomunye umuntu. Imithetho emayelana namadivayisi isebenza kuwo wonke amakhamera, amadivayisi okuqopha, amadivayisi ezobuchwepheshe, namadivayisi okuqapha.
Silapha ukuze sisize
Amadivayisi adaluliwe aqapha kuphela izindawo zomphakathi nezindawo ezisetshenziswa yiningi: Amadivayisi avumela ukubukwa noma ukugadwa kwendawo yomphakathi kuphela (isb: umnyango wangaphambili, noma indlela yokungena imoto) noma indawo esetshenziswa yiningi abonakalayo nachaziwe ngaphambi kokugunyazwa kokubhukha. Izindawo ezisetshenziswa yiningi azihlanganisi izindawo zokulala noma amagumbi okugezela.
Amadivayisi afihlekile nangadalulwanga aqapha izindawo ezisetshenziswa yiningi: Noma iyiphi idivayisi eqapha indawo esetshenziswa yiningi kufanele ifakwe ngendlela ebonakalayo futhi ivezwe encazelweni yendlu.
Amadivayisi atholakala noma aqapha indawo eziyimfihlo: Amadivayisi akumelwe aqaphele izindawo zangasese noma eziyimfihlo (isb: amagumbi okulala, izindlu zangasese, noma izindawo ezisetshenziswa yiningi ezisetshenziselwa ukulala, njengegumbi elinosofa ophinde ube umbhede). Amadivayisi angaxhunyiswe avunyelwe uma nje ezohlala ecishiwe futhi lokho kuchazwe ezivakashini.
Amadivayisi okuqopha endlini yonke noma efulethini (Ezwekazini lase-China kuphela): Amakhamera nezinto zokuqopha akuvunyelwe kuwo wonke amakhaya noma amafulethini ngaphandle kokuba achazwe kahle futhi adalulwa ezindaweni ezisetshenziswa yiningi endaweni echazwe ngokuthi yi-"resort," "isigodlo," noma i-"villa." Funda kabanzi ngale mithetho Ezwekazini lase-China.
Uma wena noma omunye umuntu ezizwa esongelwa noma engaphephile, sicela uqale uthintane neziphathimandla zezomthetho ukuze uthole usizo. Ngaphezu kwalokho, uma ubona noma uphathwa ngendlela engavumelani nezinqubomgomo zethu, sicela usitshele.
Nakuba lezi ziqondiso zingahlanganisi zonke izimo ezingaba khona, ziklanyelwe ukunikeza isiqondiso ngezinqubomgomo zomphakathi we-Airbnb.
Ukuvikela iphrayivesi yakho
Ukuze usungule indawo engakhuthazi kuphela ukuphepha okungokoqobo, kodwa nokuphepha nokuvikeleka kwemininingwane ephrayivethi, ukuziphatha n…
Retired article 887: What are Airbnb’s rules about security cameras and other recording devices in listings?
All members of the Airbnb community are required to respect each other’s privacy. Hosts should disclose all recording devices in their listi…
Amakhamera namadivayisi okurekhoda e-mainland China
Thola imithetho eqondene ne-mainland China mayelana namakhamera ezokuphepha namanye amadivayisi okurekhoda.
Thola usizo ngokubhukha kwakho, i-akhawunti, nokunye.